Kalitao avo lenta hatramin'ny 90% Mamonjy angovo hafanana avy amin'ny masoandro mifehy hafanana Rafitra rano mafana ho an'ny fanamboarana sy famokarana rafi-pitobiana mafana | SolarShine
Ity rafitra ity dia natao indrindra ho an'ny famatsiana rano mafana afovoany ara-barotra, dia be mpampiasa amin'ny orinasa sy andrim-panjakana misy mpampiasa rano marobe, toy ny hotely lehibe, ny efitranon'ny mpianatra, ny trano fiasan'ny orinasa, ny hopitaly, ny hatsaran-tarehy, ny dobo filomanosan'ny zaza sns. Noho ny filàna goavana amin'ny rano mafana dia mila mandinika manokana ny vidin'ny rano mafana ny mpampiasa vola.
Paompy hafanana azo avy amin'ny loharano iainana ambany
Taratasy plastika, galvanisika
Fanamafisana ny fizaran-tany
Freestanding, rindrina voapetraka / mpiorina
Fandroana rano / gorodona fanafanana / fancoil fanafanana sy fampangatsiahana
Heater amin'ny trano, fanafanana amin'ny habakabaka sy rano mafana, fanafanana rano amin'ny pisinina, fihenan'ny rivotra ary DHW
Finina vita amin'ny alim-bolan'ny volamena hydrofilika volamena
Temperature manodidina azy:
Mihena － 25C- 45C
Jacuzzi Spa / Pool, trano fandraisam-bahiny, varotra ary indostrialy
SolarShine dia orinasa iray mifantoka amin'ny fikarohana, fampandrosoana, fanamboarana ary fampiroboroboana ny rafitra fantsona hafanana mifangaro hafanana avy amin'ny masoandro, izay afaka manome laharam-pahamehana tanteraka ny andraikitry ny angovo avy amin'ny masoandro, miaraka amin'ny lojika fanaraha-maso mety kokoa, fahombiazana avo lenta, fampisehoana azo antoka sy azo antoka. , ambany ny tahan'ny tsy fahombiazana ary ny androm-piainana lava kokoa.
Izy io dia mahatratra ny fitambaran'ny angovo roa sosona ary mamonjy vidin'ny rano mafana be ho an'ny orinasa sy andrim-panjakana isan-karazany.
Afaka manome serivisy fampitaovana, fametrahana ary debugging tanteraka izahay amin'ny fomba iray hijanonana ho an'ny toerana sy ny fitakiana isan-karazany.
Amin'ny fametrahana an'ity rafitra ity, ny mpampiasa dia afaka mametraka mari-pana amin'ny rano kendrena isan-karazany arakaraka ny vanim-potoana sy ny toetrany. Ohatra, apetraho ny mari-pana kendrena ambany kokoa amin'ny fahavaratra ary ny hafanana avo kokoa amin'ny ririnina. Ny milina lehibe dia voatazona amina fomba mailo mandritra ny tontolo andro, manara-maso ny mari-pana amin'ny rano mandritra ny tontolo andro ary mitazona ny hafanan'ny rano mafana maharitra mandritra ny andro.
1.Ny tahiry angovo hatramin'ny 90% raha ampitahaina amin'ny heater rano mahazatra.
2.Fampiharana tsara ny angovo avy amin'ny masoandro sy ny angovo avy amin'ny rivotra.
3.Ny mpanangona takelaka fisaka mahomby mahomby na mpanangona fantsom-bovoka.
4. Fiarovana ny tontolo iainana, mifanena amin'ny compresseur mahomby avo lenta miaraka amin'ny vata fampangatsiahana R410 maitso izy.
5. Manome rano mafana na oviana na oviana, ary aza tratry ny fiovan'ny toetr'andro sy ny toetr'andro.
6. Fanaraha-maso marani-tsaina, ny mari-pana amin'ny rano dia azo ahitsy arak'izay ilaina ary fehezin'ny solo-sainanao micro.
7. Rafitra rano sy herinaratra misaraka, azo itokisana ary azo antoka.
Teo aloha: 25-50 HP Pump Pump Heat Heat
Manaraka: 1.5Hp– Fivarotana hafanana 2Hp loharano monina
Paompy hafanana sy loharano iainana avy amin'ny rivotra
Paompy hafanana hafanana amin'ny masoandro
Kitapo fitehirizana hafanana avy amin'ny masoandro
Paompy rano mafana amin'ny masoandro
25-30 fantsona voafafa Tube Solar Collector Kit ...
1.5- 2Hp Fandroana hafanana dobo filomanosana kely ho an'ny Pers ...